Androany Jesosy dia mamela heloka
"Teo amin’izay nihabeazan’ny ota no nihoaran’ny fahasoavana be lavitra."Romana 5:20
"Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, … dia ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy ho an’izay rehetra mino."Romana 3:21,22
Tany Inde hono, raha nandehandeha teny an-dalambe ity andriandahy, dia nahita olona nitangorona. Koa nentina teo aminy ny lehilahy iray tratra ambody omby nangalatra, mba hofaiziny. Namaly tsotra ilay andriandahy hoe: "Tsy any amin’ny lapan’ny fitsarana aho, avotsotro io lehilahy io". Avy eo izy nananatra ilay mpangalatra mba hiova fitondrantena. Io lehilahy io, izay faly fa tsy nogadraina, dia afaka tsara nanararaotra izany mba hanjary olo-marina, saingy naleony nanohy nangalatra, ary ny niafarany aza dia namono olona mihitsy. Rehefa voasambotra sy nogadraina izy, dia nentina indray teo anatrehan’ilay andriandahy, saingy tao amin’ny lapan’ny fitsarana, tamin’ity indray mitoraka ity. Mbola nanantena famotsoran-keloka ihany izy, saingy voaheloka ho faty. Angamba takany ihany, saingy indrisy fa tara loatra, hoe nataony tsinontsinona ilay namindrana fo taminy.
Ambaran’ny Baiboly fa samy tsy marina isika rehetra ary mpanota avokoa, eo anatrehan’Ilay Andriamanitra masina (Romana 3:10,23). Fa Andriamanitra dia fitiavana ihany koa (1 Jaona 4:8), ary asehony amintsika ny fahasoavany mahagaga izay atolony antsika amin’ny alalan’i Jesosy, maty noho ny fahadisoantsika sy noho ny fahotantsika (1 Korintiana 15:3). Aoka tsy hohamavoina ny hamoram-pony. Manome antoka antsika Andriamanitra fa izay mandre ny teniny, sy mino an’i Jesosy Ilay Mpamonjy, dia manana fiainana mandrakizay. Tsy hohelohina izy, fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana (Jaona 5:24). Androany dia Mpamonjy i Jesosy Kristy, fa indray andro any kosa dia ho Mpitsara ireo izay nandà ny famelan-keloka atolony. “Sa hamavoinao ny harenan’ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny fahari-pony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin’Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka?” (Romana 2:4).